प्रधानमन्त्रीले २-२ लाख नगद किन बाडे नयाँ मन्त्रीलाई
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका राज्यमन्त्रीलाई सरकारी क्वार्टर नपुगेपछि सरकारले डेरा व्यवस्थापन गर्न सुरुमै दुई-दुई लाख नगद दिएको छ ।मन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमा मात्रै ६२ लाख रुपैय...
काठमाडौं १८ भदौ । स्थानीय निर्वाचनपछि मतदाता गाउँनगरले विकासमाा फड्को मार्ने विश्वासमा छन् । सानोभन्दा सानो सकारी कामका लागि पनि सदरमुकाम वा केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यसंगै पारदर्शि कार्यशैली र ...
प्रदेश २ जित्न कुन दलको कस्तो रणनीति ?
असोज २ गते हुने प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचनलाई दलहरूले राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँका रूपमा लिएका छन् ।कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै होइन, राजपाले समेत प्रदेश २ का आठ जिल्लामा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रि...
फास्ट ट्रयाक : १० ठाउँमा शिविर राखेर निर्माणलाई तीव्रता
काठमाडौं । छिमेकी भारत र चीनलाई समेत जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको कामलाई दोब्बर गतिमा अघि बढाउन नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गर्ने भएको छ । यसअघ...
निगम जग्गा खरिद घोटाला : सांसदलाई सुरक्षा थ्रेट
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको घोटाला छानबीन गर्ने सांसदले आफूमाथि 'सुरक्षा थ्रेट' भएको बताएका छन् । घोटालाबाट उम्किन विभिन्न प्रपञ्च रच्दे आएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर...
मेयरमा दुई नेताका छोरा आकांक्षी भएपछि…
काठमाडौं । राजविराज - संघीय समाजवादी फोरमले तीन दिनअघि यहाँका १८ मध्ये १५ स्थानीय तहमा अम्मेदवार चयन गर्यो । अरु तीन तहमा अझै उम्मेदवार छान्न सकेको छैन । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । फोरमका तर्फबाट बोदे...
प्रधानमन्त्रीको दशै र प्रदेश २ को चुनाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर दुईमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गरेलगत्तै केन्द्रीय पदाधिकारी मनोनित गर्...
प्रदेश नम्बर २ मा एक नम्बर बन्न दलहरुको दौड
काठमाडौं । असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावका लागि यतिखेर प्रदेश २ तातिएको छ । कतिपय दल उम्मेदवारी छनोटका लागि दौडधुपमा लागेका छन् भने कतिपयले घोषणा गरी प्रचारप्रसारमा लागिसकेका छन् । ...
दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ: २० किलो मात्रै सामान बोक्न पाइने
काठमाडौं । दसैंमा घर जाने यात्रुका लागि सरकारले भदौं २२ गतेदेखि लामो र मध्यम दूरीमा चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ सुविधा खुल्ला गर्ने भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, यातायात...
प्रदेश-२ मा चुनाव भाँड्ने तयारीमा विप्लव
काठमाडौं । निर्वाचन बहिस्कारको अभियान चलाउँदै आएको नेत्रबिक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शुक्रबार राजविराजमा बाढी पीडित पाँच परिवारलाई राहत प्रदान गरेको छ। राहत प्रदान गर्दै ...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लगातार ताकेता गरिरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा शुक्रबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको छ । दुवै विधेयकमाथि सांसदहरूले प्रशस्तै संश...
नोट भोट नो किन भने ठूलाला तीनदले ?
काठमाडौं । प्रमुख दलका सांसदहरु उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने ‘नो भोट’ पद्धतिको विपक्षमा उभिएका छन् । लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने प्रावधान राख्दा झन् गन्जागोल हुने उनीहरुको धारणा...
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार मध्यराति दुई सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेपछि बिहीबार बिहानदेखि तनाव भएको छ । नियमविपरीत एकतर्फी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत...
काठमाडौं । २ सय ५० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाली सेनामा महिला सैनिकलाई सेनापति बन्नसक्नेसम्म बाटो खुला भएको छ । २०७४ सालदेखि सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा महिला सैनिकलाई सरिक ...
नवनिर्वाचित वडासदस्य कारागार चलान : पद के हुन्छ ?
पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–८ का वडा सदस्य पुष्पराज सिग्देल बिहीबार कारागार चलान गरिएका छन् । बहुविवाहको मुद्दा बहुविवाहको मुद्दामा अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिएका उनी फरार सूचीमा थिए । सिग्देल आफैं ...
नागरिकको मुख थुन्न ८० करोडको मुद्धा
नागरिक दैनिकले नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा लेखेको समाचारलाई लिएर निगमका प्रबन्धक निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले ८० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपुर्ति दाबी गर्दै नागरिक दैनिकविरुद्ध काठमाडौं ...
१२ सय कर्मचारी कानुनविपरीत काजमा
काठमाडौं । सरकारले निजामति सेवा उैनको धज्जी उडाउँदै १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा काजमा खटाउँदै आएको छ । विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा छोटो समयका लागि काज पठाउने कानुनी व्यवस्थ...
आजदेखि १३ ठाउँमा सुपथ मुल्य पसल
काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर शुक्रबारदेखि उपत्यकाका विभिन्न १३ ठाउँमा सहुलियत मुल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको छ । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राहत दिन सुपथ मुल्इ पसल सञ्चाल...
डेढ महिनामा २७ आत्महत्या
काठमाडौं । डेढ महिनाको अवधीमा जिल्लामा २७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । २०७४ साउन देखि भदौ १५ सम्ममा दैनिक जसो आत्महत्याका घटना भइरहेका छन् । एकै परिवारका ४ जना, दम्पती र १७ बर्षीय युवतीदेखि ६२ बर्षीया...
प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जाँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी असोज पहिलो साता अमेरिका जाने भएका छन् । राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । यो उनको दोस्रो विदेश भ्रमण हुनेछ । देउवाले सुरुमा ...